လောကကြီးနဲ့မပြေလည်သေးပေမယ့်လောကကြီးနဲ့ရန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ကြက်ဖ | အိုးဘို
Posted: May 1, 2009 in Interview	Tags: ကြက်ဖ, Kyat Pha	0
ကြက်ဖ​ …ဆို​တာ​က​ဂီ​တေ​ရစီး​ကြောင်း ထဲ​မှာ​စိတ်ဝင်စား​စ​ရာ​ဖြစ်စဉ်လေး​တွေ​နဲ့ပရိသတ်အာ​ရုံ​ကို​ ဖမ်း​စား​နိုင်ခဲ့​သူ​လို့ဆို​ရ​မှာ​ပါ​ပဲ​။ တစ်ကိုယ်တော်ခွေ​မ​ထွက်သေးပဲ​နဲ့ သူ့ရဲ့သီချင်းေ​တွနဲ့​ ပ​ရိ​သတ်နှ​လုံး​သား​ထဲ​ရောက်နှငျ့​ခဲ့ပြီး ​မြန်မာ​ဂီ​တ​ပ​ရိ​သတ် အများစု​ ရင်ထဲ​မှာ​သာ​မ​က​နိုင်​ငံ​ရပ်ခြား​ထိ​သီ​ချင်းေ​တွ ပျံလွင့်​ခဲ့တယ။် ကြက်ဖဆို​တဲ့​ နံမည်ကိုစိတ်ဝင်စား​နေကြ​သေ​လာက်ကြက်ဖ​က​ပ​ရိ​သတ်ရှေ့ရောက်​မ​လာ​ခဲ့​ပါ​ဘူး​။ ကြက်ဖေ​ပျာက်ေ​နခဲ့​ပါ​တယ်။
ဒီ​လို​နဲ့ ပ​ရိ​သတ်​ စိတ်​ဝင်စား​မှု​က​ ပို​မို​အား​ကောင်း​လာ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ကြက်ဖ​က​ သူ​ငယ်​ချင်း​တွေနဲ့​ အဖွဲ့ဖွဲ့လို့သီ​ချင်းတွေ​ဆို​လိုက်​၊ တစ်ကိုယ်တော်ခွေ​ အ​တွက်သီ​ချင်းတွေ​ သွင်းလိုက် နဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲ..
လူငယ်သဘာဝ – Cyclone	အရှေ့တောင် အာရှမှာ ပထမဆုံး DBPT နှင့်ထုတ်လွှင့်သော စနစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၂ဝဝ၅)ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၅)ရက်နေ့မှာ စတင် အသုံးပြု..	Createafree website or blog at WordPress.com.	%d bloggers like this: